किन्ने नै भयो त एभरेष्ट बैंकले आइसिएफसी फाइनान्स ? - KlipMandu
तर, अहिलेसम्म भएको प्रगतिको बारेमा दुवै पक्षबीच गोप्य राख्ने सहमति भएको बुझिएको छ । एभरेष्ट बैंकसँग अन्य धेरै वित्तीय संस्थासँग मर्जरको हल्ला चलाइयो तर राष्ट्र बैंकले ८ अर्ब चुक्ता पूँजी पु¥याउने दिएको समय सिमा नजिकिंदै आएकाले यस पटकको आइसिएफसी फाइनान्ससँगको मर्जर भने नरोकिने स्रोतको भनाइ छ । आइसिएफसी फाइनान्ससँगको मर्जको हल्ला संस्थाहरुको व्यवस्थापनमा मात्र सिमित नभइ शेयर बजारसम्म आएपछि आइसिएफसी फाइनान्सको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता ८ रुपैयाँसम्म बढेको छ ।
हिजो (मंगलबार) समग्र बजार ३९.५७ विन्दुले ओरालो लागेको बेला पनि उक्त फाइनान्सको मूल्य भने बढ्नुलाई लगानकर्ताले अर्थपूर्ण रुपमा हेरेका थिए । सूचनाको पहँुच भएका व्यक्तिले उक्त फाइनान्सको शेयर खरिद गरिरहेका थिए भने केही लगानीकर्ताले त्यस्तो सूचनालाई हल्लाको रुपमा लिएका थिए । केहीले भने एभरेष्ट बैंकले खरिद गर्दै छ भन्ने सम्मको सुइको समेत पाएका थिएनन् ।
हिजो (मंगलबार) उक्त फाइनान्सको शेयर पनि ४४ हजार ५५ कित्ता कारोबार भयो । न्यूनतम मूल्य ३१८ रुपैयाँ र अधिकतम मूल्य ३४२ रुपैयाँमा उक्त फाइनान्स कम्पनीको शेयर कारोबार हुन पुगेको थियो । कारोबारको अन्तिममा ३२० रुपैयाँमा कारोबार भएर रोकिन पुग्यो ।
केही चलाख लगानीकर्ताले गोप्य सूचना पाएका कारण उक्त फाइनान्सको शेयर उठाइरहेको केहि ब्रोकरको भनाइ छ । तर, एभरेष्ट बैंक र उक्त फाइनान्सको शेयर अनुपात कति रहने भन्ने कुरा बाहिर नआइसकेकाले पनि अहिले सेयर किन्नेले फाइदा नै लिन सक्छन भन्ने भने छैन् ।
उता, एभरेष्ट बैंकले मर्जरका लागि उपयुक्त पार्टनको खोजी गर्दै वैशाख २० गते विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनको मूख्य एजेण्डा लिएर बोलाएको उक्त विशेष साधारण सभासँगै शेयर मूल्यमा उच्च गिरावट आएको छ । हकप्रद शेयर दिने आशामा बसेका लगानीकर्ताहरुमा निराशा छाएपछि भटाभट शेयर बिक्री गर्दा शेयर मूल्यमा भारी गिरावट आएको हो ।
एभरेष्ट बैंकको शेयर मूल्य हिजो (मंगलबार) प्रतिकित्ता २ सय ४ रुपैयाँले घट्न पुग्यो । प्रतिकित्ता २ हजार ९ रुपैयाँमा किनबेच हुँदै आएको शेयर मूल्य १ हजार ८ सय ४५ रुपैयाँमा झरेको थियो । आइसिएफसी फाइनान्स लगायतका अन्य फाइनान्सलाई किन्ने कुरा गरेपछि लगानीकर्ताले आशा गरेको हकप्रद र बोनस शेयर नआउने हो कि भन्ने आशंका बढ्दै जादा लगानीकर्ताले धमाधम शेयर बिक्री गर्न थाल्दा शेयर मूल्य घटेको हो ।
नेपाल राष्ट बैंकमा चुक्ता पूँजी कसरी ८ अर्ब पुरयाउने भन्ने सम्बन्धमा पेश गरेको योजनामा पनि मर्जर वा एक्विजिसनलाई एभरेष्ट बैंकले प्राथमिकता दिएको थियो ।
← ग्लोबल आईएमई बैङ्कको शेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् कम्पनी विश्लेषण
जलबिद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले गर्यो लाभांशको प्रस्ताव!!! →
AKSAR2 hindi movie